Home Wararka Farqiga u Dhaxeeya Doorashadii 2016 iyo Doorashada 2021 oo isu Rogtay Xulasho.
Farqiga u Dhaxeeya Doorashadii 2016 iyo Doorashada 2021 oo isu Rogtay Xulasho.
Maalinba maalinta ka dambeysa waxay u muuqataa in aan doorasho laga qaban doonin dalka oo waxaa socdaa dhammaantood ay ku jiheysan yihiin jiitan iyo in dadka la daaliyo, iyadoo jeebka laga soo bixi rabo qorshaha dhabta ah ee doorashada.
Isbar bar yaaca ujeedeysan iyo marin habaabint aqorsheysa dhammaan tood waxay ku biyo shuban rabaan in la yiraahdo haddana qorshahaas waa khaldamay ee dib ha loo kulmo oo ha loo saxo, taasina ay mar waliba waqti ka sii cuneyso waqtigii doorashada loo qabtay oo markii seddexaad dhacaya, si markaan aanba waqti dambe loo qaban lana yiraahdo dalku diyaar maaha marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo dowlad KMG ah oo dalka gaarsiisa doorasho Q&C ah.
Lugooyada iyo dib u riixa doorashada markii hore waxaa lagu eedeynayey Farmajo, Fahad iyo Golaha Shacbiga oo la hubo inay weli qeyb weyn ku leeyihiin lugooyada, laakiin hadda waxay u muuqataa inay ku biireen DG iyo RW Rooble oo maalin walba muujin jiray inuu rabo inuu doorashada si habsami ah, waqtigeeda ah, xor iyo xalaal ah ku qabto, laakiin marka loo abtiriyo hannaankii lagu soo xulay aqalka sare inta la leeyahay waa xulan tahay ayaa marqaati cad ka ah inuusan maranaba rabin inuu run noqdo hadalkiisa balse uu ahaa ku seexi mucaaridka.
Rooble waxaa uu u hambalyeeyey wixii ay soo dhoobdhoobteen afarta maamul goboleed ee P/Labd, J/Land, G/Mudug iyo K/Galbeed oo ay liiska murashixiinta ku soo qorteen qolalakooda jiifka dadkana ka soo kaxeysteen qolalka fadhiga ee gurigooda kadibna ay keeneen goobtii codeynta oo loo sii diyaareyey in dadka lagu indha sarcaadiyo. Rooble hadduu rabbi kaga cabsaayo qabashada doorashada oo uu u qabanayo si waafaqsan hannaankii la isla ogaa oo tusaale u ah 2016, waxaa uu isla markiiba diidi lahaa waxa si cad ee aan qarsoodiga lahayn ee eexda iyo nin jicleysiga lagu soo sameystay.
Wuxuu RW Rooble taa kaga daray isagoo yiri jidkii aad u qaadeen qabashada xulashada aqalka sare waa sax waana jidka aan u qadi doonno xulashada aqalka hoose oo ciiddii aan rabanna waa soo saareynaa kuwan aan nacnana waa ka reebeynaa, waxaana u sameysaneynaa qaab aan sharci uga dhiganno.
Waxan halkaan idin kugu soo gudbineynaa nuqul ah sidii loo maamulay doorashadii 2016, taas oo muujineysa hannaan hufan oo cad oo la raaci karay haddaan intaanba laga sii hormarineyn, iyadoo la sixi karay haddii uu dhaliilo leeyahay, laakiin waa la iska tuuray waayo wuxuu u muuqday inuu yahay xor iyo xalaal aad uga wanaagsan jidka la rabo in hadda la mariyo doorashadaan oo hadda noqotay xulsho ay soo xulanayaa reer Farmajo iyo DG oo u muuqda inay isku ujeeddo noqdeen.
Tusaale qoondada haweenka ee 30% doorashadaas 2016 si aad ayaa loo ilaaliyey, hadda waxaa muuqata ilaalin iska dhaafe inau suragal tahay inaysan ka soo galin 5%, waana dib u dhac aad u weyn waayo markaas waxaa wax lagu soo xulayey xeer iyo hannaan la isla ogyahy, laakiin waxaa gacanta loo geliyey madaxda MG oo iyaga soo saaraya cidda ay rabaan inay u codeyso berito ama ay ka amar qaadato.
Halkaan ka eeg qaabkii loo qabtay doorashadii 2016.